Elaịhu kwuru na Chineke na-ekpe ikpe ziri ezi (1-37)
Job sịrị na Chineke kpere ya ikpe mkpegbu (5)
Ezi Chineke anaghị eme ihe ọjọọ (10)
Job amaghị ihe ọ na-ekwu (35)
34 Elaịhu kwukwara, sị: 2 “Unu ndị ma ihe, geenụ ntị n’ihe m na-ekwu. Ṅaanụ m ntị, unu ndị ọkachamara. 3 N’ihi na ntị na-atụle okwuOtú ire* si amata otú nri na-atọ. 4 Ka anyị jiri aka anyị chọpụta ihe bụ́ ihe ziri ezi. Ka anyị kpebie ihe bụ́ ihe dị mma. 5 N’ihi na Job sịrị, ‘Aka m dị ọcha.+ Ma Chineke ekpeela m ikpe mkpegbu.+ 6 M̀ ga-agha ụgha, sị na e kwesịrị ịma m ikpe? Ọnyá m anaghị ala ala n’agbanyeghị na e nweghị iwu m dara.’+ 7 È nwere nwoke ọzọ dị ka Job,Onye a na-akwa emo, ya ana-aṅụ ya ka mmiri? 8 Ya na ndị na-eme ihe ọjọọ bụzi otu. Ya na ndị ajọ omume dịkwa ná mma.+ 9 N’ihi na ọ sịrị, ‘E nweghị uru mmadụ na-eriteNa ọ na-agbalị ime ihe dị Chineke mma.’+ 10 N’ihi ya, geenụ m ntị, unu ndị na-aghọta ihe: Chineke emekataghị mee ihe ọjọọ.+ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile emekataghị mee ihe na-adịghị mma.+ 11 N’ihi na ọ ga-akwụ mmadụ ụgwọ ihe ọ na-eme,+Ọ ga-emekwa ka onye ahụ taa ahụhụ ihe o metara. 12 N’eziokwu, Chineke anaghị eme ihe ọjọọ.+ Onye Pụrụ Ime Ihe Niile anaghị ekpe ikpe na-ezighị ezi.+ 13 Ònye nyefere ụwa n’aka ya? Ọ̀ bụkwa onye họpụtara ya ka o lekọtawa ụwa niile? 14 Ọ bụrụ na o lekwasị ndị mmadụ anya,Ọ bụrụ na o kpebie ịnapụ ha mmụọ ya na ume ha na-eku,+ 15 Mmadụ* niile ga-anwụ,Mmadụ ga-alaghachikwa n’ájá.+ 16 N’ihi ya, ọ bụrụ na ị na-aghọta ihe, ṅaa ntị. Gee ntị nke ọma n’ihe m na-ekwu. 17 Ò kwesịrị ịbụ onye kpọrọ ikpe ziri ezi asị na-achị? Ka ị̀ ga-akpọ onye dị ike nke na-eme ezi omume onye ọjọọ? 18 Ị̀ ga-asị eze, ‘Ị baghị uru,’Ma ọ bụ sị ndị a ma ama, ‘Unu bụ ndị ajọ omume’?+ 19 E nwere Onye na-anaghị ele ndị isi anya n’ihu,Onye na-anaghịkwa ahapụ ogbenye menyere ọgaranya,+N’ihi na ọ bụ ya kere ha niile.+ 20 Ha nwere ike ịnwụ na mberede,+ n’etiti abalị.+ Ha na-amasi jijiji ike wee nwụọ. Ndị dị ike na-alakwa n’iyi, ma ọ bụghị mmadụ na-ala ha n’iyi.+ 21 N’ihi na anya Chineke na-ahụ ụzọ mmadụ,+Ọ na-ahụkwa nzọụkwụ ya niile. 22 E nweghị itiri ma ọ bụ oké ọchịchịrị,Bụ́ ebe ndị na-eme ihe ọjọọ nwere ike izo.+ 23 N’ihi na e nweghị onye Chineke yiiri ogeỌ ga-abịa n’ihu Chineke ka o kpee ya ikpe. 24 Ọ na-ebibi ndị dị ike n’ebughị ụzọ mee nchọpụta,Ọ na-akpọrọkwa ndị ọzọ dochie ha.+ 25 N’ihi na ọ ma ihe ha na-eme.+ Ọ na-emeri ha n’abalị, e bibie ha.+ 26 Ọ na-ebibi ha n’ihi ajọ omume ha,N’ebe mmadụ niile ga-ahụ ha,+ 27 N’ihi na ha akwụsịla iso ya,+E nweghịkwa ihe ha ji ihe ọ bụla ọ na-eme kpọrọ.+ 28 Ha na-eme ka ndị ogbenye besara ya ákwá,Nke na-eme ka ọ nụ ákwá ndị na-enweghị onye na-enyere ha aka.+ 29 Ọ bụrụ na Chineke agbachi nkịtị, ònye ga-ama ya ikpe? Ọ bụrụ na o zoo ihu ya, ònye ga-ahụ ya? Ma ọ̀ bụ mba ma ọ̀ bụ otu onye ka o zooro ihu ya, ọ bụ otu ihe ahụ ga-eme, 30 Ya bụ, ọ gaghị ekwe ka onye na-anaghị asọpụrụ ya* chịa+Ma ọ bụ kwe ka onye ahụ mee ka ọnyà ma ndị mmadụ. 31 N’ihi na è nwere onye ga-asị Chineke,‘A taala m ahụhụ n’agbanyeghị na e nweghị ihe ọjọọ m mere.+ 32 Kụziere m ihe m na-ahụbeghị. Ọ bụrụ na e nwere ihe ọjọọ m mere, agaghị m eme ya ọzọ’? 33 Ọ̀ ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ otú i si chọọ ebe ọ bụ na ị jụrụ ikpe ya? Ọ bụ gị ga-ekpebi, ọ bụghị m. Gwazie m ihe ahụ ị ma. 34 Ndị na-aghọta ihe,Ya bụ, onye ọ bụla ma ihe nke na-anụ ihe m na-ekwu, ga-asị m, 35 ‘Job amaghị ihe ọ na-ekwu.+ Ihe ọ na-ekwu gosiri na ọ naghị aghọta ihe.’ 36 Ka a nwalee Job* ruo n’isiN’ihi na ọ na-asa okwu otú ndị na-eme ihe ọjọọ si asa. 37 A ka na-ekwu na o mehiere, ya ana-enupụkwa isi.+ Ọ na-akụ aka iji kwaa anyị emo,Ọ na-ebokwa ezi Chineke ọtụtụ ebubo.”+
^ O nwere ike ịbụ, “Nna m, ka a nwalee Job.”